बडादशैंमा टीका कसरी लगाउने टीका ? Nepalpatra बडादशैंमा टीका कसरी लगाउने टीका ?
बडादशैंमा टीका कसरी लगाउने टीका ?
काठमाडौँ । विदेशबाट आउनेका लागि भने अखिल बलि पूर्ति गरेपछि पनि प्रसाद बाँकी राखेर कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनसम्म पनि टीका लगाइदिन सकिने जनाइएको छ । विजयादशमीका दिन चन्द्रमा मकर राशिमा रहेकाले टीका लगाइमाग्ने मानिस पूर्व फर्कनुपर्ने समितिले जनाएको छ । लगाइदिने मानिस पश्चिम फर्कँदा मकर राशिमा रहेका चन्द्रमा दाहिने हुन्छन् । चन्द्रमा दाहिने वा सम्मुख पारेर टीका लगाउनुपर्ने शास्त्रीय मान्यता छ ।
विजयादशमीका दिन मान्यजनहरुबाट मन्त्रसहित टीका थाप्नुपर्छ। टीका लगाउँदा जमरा अनिवार्य मानिन्छ। त्यस्तै, दहीमा मुछेर रङ हालेर चामलको अक्षता लगाउने चलन छ । देवीलाई रातो रङ उपयुक्त हुने पनि भट्टराई बतााउँछन् ।
यस्तो छ बडादशैंमा पढिने मन्त्र :
ॐ आयू द्रोण सुते, श्रृयं दशरथे शत्रुक्षयं राधवे,
#विजयादशमीको कसरी लगाउने टीका ?